घर MANAGERS लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB सर्वश्रेष्ठ फुटबल प्रबन्धक को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नाम निकनाम; 'राजा'। हाम्रो लुई वैन गल बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्याङ्क तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। अब थप adieu बिना, सुरु हुन्छ।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
एलोयसस पलसिया मारिया लुई भे गाल को जन्म 8 को 1951th मा जन्म भएको थियो। उहाँ नौ भाइबहिनीहरूको ठूलो परिवारको सबै भन्दा सानो र बच्चा हुनुहुन्थ्यो। बढ्दै गयो, वान ग्यालले आफ्नो गम्भीर बीमार पितासँग एक संकटग्रस्त सम्बन्ध राखेका थिए र प्रायः उनीहरूले आफ्नो कष्टको क्याथोलिक अप्ठ्यारो विरुद्ध विद्रोह गरे।
एक बच्चाको रूपमा, उनको जीवन फर्म अनुशासन र भाग लाड़को अंश थियो। कसैलाई उनीहरूले आत्म-आश्वासन दिएका लखकलाहरू देखाए 'बच्चा' चार भाइहरू, चार बहिनीहरू र उहाँका मायालु आमाबाबुले बिर्सेका थिए। यद्यपि, भ्यान ग्यालले यसलाई फरक फरक पार्छ। उनका मानना ​​छ कि उनको घरको जीवनले उनको कोचिंग नैतिकतालाई अनुशासन दिईयो।
बच्चाको रूपमा, एम्स्टर्डम घरमा घरको नजिकै थियो डे मेर स्टेडियम - त्यो अज्याक्सको मैदान हो। वान गाउ परिवारले सबैलाई आदेश दिएका थिए, प्रत्येक बच्चाले कुनामा आवंटित गरे, तालिकामा सेट गर्न, एक व्यञ्जनलाई धोकाउन को लागी ... लुई आफ्नो आमाबाबुको पसल हेर्दै हेर्दै थिए र आलुको परिवारलाई खाना खान चाहियो। ।
पछि, ज्यू लुइस वान गल पनि लामो थियो र उनले आफ्ना साथीहरूसँग सडक खेलमा गोल गरे भने: "हेन्की, हेन्की, हेन्की!"।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: व्यवहार
केहि विशेषताहरु वान गल उन बच्चाहरु को खेल मा प्रदर्शित हुन अझै पनि वहाँ थिए जब उनले एक वयस्क भए, उनको आफ्नै कमजोरी को नजरअंदाज र दूसरों संग धैर्यता को कमी को लागी प्रवृत्ति सहित। यो गाह्रो थियो र त्यसबेला पनि, मजाकका लागि केटा होइन। जीवन धेरै गम्भीर थियो। त्यो सँधै राम्रो भएन, सधैँ जित्न चाहन्थे। जब त्यो मिठो हराउँदा उनी रिस उठाउँछन्, उनीहरूको सबैभन्दा राम्रो पल उहाँसँग डराउँछ।
उसको अनुसार.."ध्यान अहंकार मेरो सफलता को लागी छ". लुईन एक प्रमाणित विजेता बन्नु भएको एक गंभीर बच्चा थियो।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
उनका पिता, एक ऊर्जा कम्पनीको प्रबन्धकले युवा लुइसलाई प्रेरित गरे। 'मेरो बुबाको जस्तै यस्तै चरित्र थियो,' उसले भन्यो। 'उनको खुल्ला दिमाग थियो। उहाँले सुन्नुभयो र साहस गर्ने साहस थियो जुन केही लागि स्वीकार गर्न गाह्रो थियो। उहाँ नेता व्यक्ति हुनुहुन्छ। '
जब लुई छ छ र वान ग्वाल स्नरले एक हाउसमा आक्रमणको सामना गरे र पाँच वर्ष पछि मरे जब उनी 11 थिए। आफ्नो बुबाको मृत्यु पछि, उनको आमा आफ्नो जीवनको केन्द्रीय व्यक्ति बन्नुभयो र उनको लागि उनको प्रेम सधैं स्पष्ट रहेको छ।
जब उनी डचको डिनरको बराबर थियो, अर्डर-नसाऊको अर्डर, उनले पक्का साझेदारी गरे कि उनी पल साझेदारी गर्न आफ्नो पक्षमा थिए। वान गालले पछि भने कि यो उनको थियो कि उनले ईमानदारी, आदर, अनुशासन र जिम्मेवारीको आफ्नो मूल मूल्य पाएको।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पहिलो पत्नी
18 को उमेर मा, भ्यान गलले एक क्याथोलिक युवा समूह मा फर्नांडा Obbes संग मिले। त्यो तब 16 को रूप मा थियो। दुवै पक्षहरू प्रेममा परे। मित्रहरूले यो पहिलो नजरमा प्रेम थियो किनभने उनीहरूले आफ्नो घर नजिकको क्याथोलिक युवा समाजमा आँखा बन्द गरे। उनी तीन वर्ष पछि विवाह गरे, र दुई छोरीहरू, ब्रेन्डा र रेनेट।
लुईस भ्यान गल यसको कारणले हरेक क्याथोलिक चर्चको दोस्रो भाग थियो। उहाँले धूपको बिस्तारै रोटी-अनारको छातीलाई माया गर्नुभयो। उसलाई चर्चमा छान्नको लागि उहाँले आफ्ना पितालाई धन्यवाद चढाउने एउटा राम्रो कारण पार्यो।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: तीव्रता
तिनीहरू विवाहित थिए जब लुई अझै पनि एक्लै एक्लै एक्लै एक्लै बस्न थालिन्, एक्लै एक्लै थिइन्। डाक्टरले उनको जिगर र प्यान्रेट्रेटिक कैंसरको निदान गरे। होल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो फुटबल क्लबको प्रभारीमा उनको स्थानमा उनले सबै भन्दा राम्रो डाक्टरहरू र सर्जनहरूमा पहुँच गरेका थिए तर केही गरेनन्।
बरु, भ्यान गलले आफूलाई आफ्नै चुनौतीभन्दा बाहिरका चुनौतीहरूको सामना गर्यो। उनले आफ्नो पत्नीलाई निजी बनाएर आफ्नो सर्वोत्तम काम गरिसकेका थिए भने उनीहरूले फलामको अनुशासन देखाउन थालिन् किनभने डचका विरोधी प्रशंसकहरूले आफ्नो महाकाव्यलाई चकित पारेका थिए र उनीहरूलाई विफलता ल्याउन सबैले गरे।
हल्याण्डमा महिलाको लागि दुई शब्दहरू छन्। 'Vrouw' मायालु साझेदारको आदर देखाउँछ। 'Wijf' अपमानजनक छ - जस्तै केहि चीज भएको छ 'कुतिया'.
एक अजाक्स खेलमा, प्रतिद्वंद्वी प्रशंसकले एक ब्यानरलाई आफ्नी पत्नीको क्यान्सरबारे उल्लेख गरे। प्लेकार्डले पढे: 'वान गाल, यो क्यान्सर क्यान्सर', जसलाई प्रायः रूपमा अनुवाद हुने छ 'वान गालसँग एक क्यान्सर कुतिया छ'। यसले चोट पर्छ पर्छ तर उनले आफ्नो रिस देख्न अनुमति दिएनन्। उनले मात्र निजी दर्शकहरूलाई अनुरोध गरे। यो साँच्चै अज्याक्सका विरोधीहरूले उनको रोगमा मजाक देख्ने एक कठिन कुरा थियो ... .जस्तै उनले उनीहरूको प्रिय जीवनको लागि लडाइँ गरे।
वास्तवमा, केहि चीजहरू छन् जुन लुइस वेगालले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। एक जीवन जसको सँधै कठिन काम भएको छ, यसको मूल मूल्यको रूपमा अनुशासन र अर्डर एक बिरवाद्धमा पठाइएको थियो जब उनको मृत्यु भयो। त्यहि वर्ष 1994 को, Obbes लिभर र अग्निरोधी क्यान्सरको मृत्यु भयो। यो अन्तिम समय लुइस वान गल कहिले रोएको थियो।
रिपोर्टले संकेत गर्यो कि त्यो एक भारी धूम्रपान गर्ने थियो। यो उनको मृत्युको सम्भावनाको कारण हुनुपर्दछ।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पत्नीको मृत्यु पछि भगवानमा विश्वास गुमायो
जनवरी, 1994, जब उनको पहिलो पत्नी फर्नांडा Obbes 39 उमेर मा लिभर क्यान्सर को मृत्यु भयो, उनले लगभग दुई छोरीहरु, ब्रेन्डा र रेनेट को लागी फुटबल छोड्न छोड्यो। अन्तमा, यो भगवान थियो जसमा उहाँले दिनुभएको थियो। आफ्नो आत्मकथामा, वान ग्यालले सम्झाउँछन्: "मैले फर्नाण्डन गुमाउँदा, त्यसपछि मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्न छोडें र क्याथोलिक हुन छोडें। यो परमेश्वरले मानव र मेरी पत्नीको पीडाको आदर गर्नुभएन। म भगवान संग केहि गर्न चाहन्छु जसले मानिसहरूलाई धेरै पीडा दिन्छ। " लुईनले केही समय पछि आफ्नो विश्वास त्याग्यो।
फर्नाडाले मात्र 16 महिना बितिसकेका थिए जुन पहिले वेन ग्याले अजैक्सलाई युरोपियन च्याम्पियन्समा परिणत गर्न थालेको थियो। उहाँले थप गर्नुभयो: "मैले अज्याक्समा व्यवस्थापकको रूपमा इस्तीफा दिएका थिए। मैले आफ्नो छोरीलाई सोधें कि म खेललाई तिनीहरूलाई बढाउन छोड्न चाहान्छु, तर दुबैले भन्यो कि उनीहरूले मलाई जान्न चाहन्थे र भन्यो कि उनीहरु उनको माईको इच्छा पनि थियो। "
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: दोस्रो विवाह
उनको पहिलो पत्नीको मृत्यु पछि लुइस भेगालले आफ्नो दोस्रो पत्नी ट्रूस भेट्टाए। फर्नान्डाको मृत्यु पछि लामो समय भेटिएन र 14 मा लुई प्रस्तावित गर्नु अघि 2007 वर्षको लागि साझेदार थिए।
लुईस वान गलले सामान्यतया कहिल्यै गरेनन् जब उनले प्रस्ताव गरे। त्यो एक घुटने मा तल नहीं जा सका - उनको समय मा टूटे हुए पैदल थियो! तिनीहरूले आफ्नो जन्मदिनको शुभ तिथिमा विवाह गरे- 08-08-08 - निमन्त्रणाले संकेत गर्यो।
ट्रूसले यस्तो लेखे: '' म हामी बसोबास जान चाहन्छु, केवल हामी दुई, तर लुईस ठूलो उत्सव चाहन्छ। उहाँले यसो भन्नुभयो: "यदि तपाइँसँग जवज मनाउनु भएको छ, त्यसपछि मनाउनुहोस्"। उहाँ सही थियो। एक गोप्य विवाह गलत भएको थियो। विवाह अद्भुत थियो। यो मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो, उसलाई महत्त्वपूर्ण छैन। उनले मलाई मलाई उनको पत्नीको रुपमा मान्थे तर मीडियाले मलाई "लुईस प्रेमिका" को रुपमा उल्लेख गरिरह्यो। मलाई त्यो मन परेन।
फर्नाडा (उनको पहिलो पत्नी) को तस्वीर अझै पनि छ - जसको साथ भ्यान गल दुई छोरी थिए - घर मा उनले अब आफ्नो दोस्रो पत्नी, ट्रूसको साथ साझेदारी गरे। उनले हरेक विजेता सबै क्लबमा उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेपछि उनलाई बाहिर भेट्टाउन पाए। आफ्नो जन्मदिनहरूमा पनि।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: जोस Mourinho संग प्रारम्भिक सम्बन्ध
जब सर बॉबी रोबसन 1997 मा खारिज गरिएको थियो, यो आफ्नो अनुवादक-बदल-सहायक (जोस मोरहोन्ह) प्रकट भएको थियो उहाँसँग बिगाडिनेछ। तर 34 वर्षीय Mourinho क्लब अध्यक्ष मा जोस लुइस नुनज र वेन गलको मनपराएको मनपर्यो जस्तो लाग्यो। सर बॉबीले वान गाललाई जवान मान्छे राख्न र डचमानले अधिग्रहण गरे। "उनको रिसाउनु राम्रो थियो," भ्यान ग्वाले भने। "त्यसपछि मैले भने: 'तिमी मेरो हो।' "
यद्यपि यो Dutchman को अधीन थियो कि Mourinho व्यवस्थापन मा आफ्नो पहिलो चरण बनाइयो।
नेउ क्याम्पमा तीन वर्षको घटनाक्रमले युरोपियन निराशाको साथ विश्वव्यापी सफलता देखाएको छ - साथै अंग्रेजी पक्षका केही प्रसिद्ध म्याच अपहरू। साझेदारीको अन्त्य हुँदा, प्रशिक्षकले आफ्नो मालिकलाई एक मिलानमा खसाएर दबाब दिएर लामो सडकमा पहिलो चरण बनाएको थियो।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: मैनचेस्टर यूनाइटेड पछि जीवन
17 जनवरी 2017 मा यो घोषणा गरिएको थियो कि वान गाल ले सेवानिवृत्त भएको थियो "पारिवारिक कारणहरूको लागि". पछि तिनले भने कि यो केवल एक sabbatical थियो। यो नोट उल्लेखनीय छ कि ट्रूस (उनको दोस्रो सेमिफाइनल) एक दिन देखि संयुक्त तंग देखि घृणा भयो। उनीहरूले सेवानिवृत्ति पछि धेरै समय बिताउन सक्थे।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: लाखौं पानोजी योजनामा ​​हरायो
अनुसार डेली टेलीग्राफ, यो 2009 मा उभिएको थियो कि भ्यान गालले धोखाधारी बर्न मदोफको पोन्जा योजनामा ​​5 मिलियन पाउन्ड पाउनुपर्थ्यो।
यो वाल स्ट्रीट गुरुको पोन्जा योजना हो। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका विभिन्न अन्य सितारहरूसँग संसारमा हराएको प्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक वा अप्रत्यक्ष रूपमा Madoff सँग हराएका छन्।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उपलब्धिहरू
भ्यान गल, आफ्नो कठोरताको लागि आयरन टलिपिप डब गरिएको छ, एक पटक डच टोलीले तेस्रो स्थानमा पारेको छ
विश्वकपमा। उनको अज्याक्सले एक्सएनएनएक्सएक्स च्याम्पियंस लीग जित्यो र उनले बार्सर्न मनिच र स्पेनको ला लीगासँग बार्सिलोनासँग जर्मन पद उठाए।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: हङकङमा
एकपटक सूर्यले एकपटक थाहा पाएको थियो कि 64 वर्षको क्लब पछि क्लबको व्यतीत नगरेको बेला खेलाडीले धेरै मनपर्ने बैरी मोोरहाउस, एकपटक एक वेश्याबाट वाइन ग्याल (बेवास्ता) देखाइएको थियो।
उहाँ रेड्स प्लेयर प्लेयर प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो। उनले म्यानचेस्टर अधिकारी र म्यानचेस्टर युनाइटेड विकास एसोसिएसनका लागि क्यासियरको रूपमा क्लबको साथ शुरू गरे जुन क्लबको निधि हातमा लगाइएको हात थियो। उहाँ पछि प्लेयर सल्लाहकारको भूमिकामा जानुभयो।
लुईस वान गलले उनको दोहोर्याएका म्याचहरू हराएपछि उनको खेलाडीलाई बचाउन आफ्नो सबै भन्दा राम्रो काम गर्दैन। भ्यान गाल बोर्ड द्वारा बोराको तल तल जान अघि, उनले उसलाई मा अक्ष फेंक्यो। यसले संयुक्त राष्ट्रको व्यवस्थापनले धेरैलाई शङ्का दिइरहेको छ जसले प्रबन्धकको रूपमा आफ्नो तत्काल बोरीको लागि प्रार्थना गर्दछ।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: जोहान क्रुफ र रोनाल्ड कोमेन संग मुद्दा
उनले एक पटक एकचोटि डच लीजेंन्ड जोहान क्रुफको साथ हुँदा उनी एक खेलाडी थिए। मालिक अब शुरुआती 67s को अजाक्स साइड मा एक स्थान को लागि एक पूर्व प्रतिद्वंद्वी मा डच लेजेंन्ड जोहान क्रुफ, संग कुरा नहीं गर्नेछन्। नजिकका साथीहरूको अनुसार, तिनीहरू अझ अझै मेलमिलापमा छन्।
उनले नयाँ साउथमाम्पटन मालिक रोनाल्ड कोम्यानसँग पराजित गरे तापनि जोडीले विश्व कपमा चीजहरू धकेल्न थालेका छन्।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: ट्रेडमार्क Pulloff
भ्यान गाल एकपटक उनको पतलूनलाई म्यूनिख ड्रेसिंग रूममा बायर्न देखाउन तल हटाइयो
खेलाडीहरूले उनीहरूको बल खडा गर्नका लागि बलहरू थिए।
दुर्व्यवहार गरे प्रश्नहरु उनको ट्रेडमार्क डांडडाउन संग भेटिन्छ: "म त्यो स्मार्ट हो, वा तपाईं मूर्ख हुनुहुन्छ?" उसले कुनै पत्रकारलाई बताउँछ कि उसलाई सोध्छ कि उनको कार्य को औचित्य दिइन्छ।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: सारांशमा व्यक्तित्व
Pals भन्छन् कि उसले पैसाको ख्याल गर्दैन (जो कोहीसँग जोखिम छ र5मिलियन पाउन्ड एक ponzi योजनामा ​​हराएको छ र अझै पनि हिलाएको छैन) र यति ईमानदार छ कि उसले कहिल्यै झूट गर्न सक्दैन। रुउड थपियो: "उहाँ पनि अत्यन्तै भरोसा राख्नुहुन्छ, यद्यपि तपाइँ एक चोटि त्यस्तो भरोसा तोड्नु भयो।"
उनको पूर्व-विद्यालय प्रेमी मार्टिन स्प्यानरर, 61 ले भन्यो: "लुइस थोडा अजीब हुन सक्छ। मलाई त्यहाँ दुई पक्षहरू छन् - एक धेरै राम्रो र विनम्र छ, अर्कोले सोच्नुहुन्छ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। "
अरूले सोचेका छन् कि त्यो केवल गलत छ। अर्को साथीले भने: "उहाँ बाहिरबाट कडा मेहनत गर्नुहुन्छ
तर उहाँको भित्र धेरै नरम छ। " टेलिभिजनमा उहाँ सधैँ गम्भीर हुनुहुन्छ, तर उहाँका साथीहरू वरिपरि उहाँ हास्यको राम्रो अर्थ छ।
लुइस वान ग्यालले एक पटक यसो भने। "म म हुँ र मेरो आफ्नै तरिका छन्। म परिवर्तन गर्न जाँदैछु र मेरो कुनै इच्छा छैन। म मिडियाको रूपमा जिद्दीको रूपमा मसँग कुराकानी गर्दैछु तर म पनि उत्तम आधुनिक दिन कोचहरु मध्ये एक हुँ, र कुल फुटबल को प्रमोटर।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: अज्याक्ससँग जीवन
लुईस वान गल को तहत, एक conspicuously जवान अजक्स टीम युरोप मा सबै भन्दा राम्रो पक्ष बन्यो, चैंपियंस लीग जीतयो र मध्य 90s को मध्य लीग मा एक पूरा वर्ष बिना बनी। भ्यान गालले डे बोयर भाइहरू, क्लारेन्स सेडर्फर्फ, एडगर डेविड्स र एडविन भ्यान डेर सोसोको विकासको निरीक्षण गरे। तथापि, पछि ठूलो पैसा सुरक्षित पछि पछि, तिनीहरूका धेरैजना युवा खेलाडीले सफलतापूर्वक कहिल्यै आफ्नो क्षमता पूरा गर्न सकेनन् - पैट्रिक क्लायवर्ट, विन्स्टन बोगर्ड, माइकल रेजिगर र फिनिडी जर्जको मुख्य उदाहरणहरू।
भ्यान ग्वालले यो रोचक लिन्छ किन यो यो छ: "मलाई लाग््छ यो यो तार्किक छ कि अज्याक्स छोड्ने खेलाडीहरूले आफ्नो पूर्व स्तर अन्य ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्। हामी कुनै पनि तरिका जस्तै रेलहरू गर्दैनौं, र त्यहाँ पनि अजेक्सको रूपमा एकअर्कासँग मिलेर खेलाडीका गुणहरू छैनन्। विदेशमा, एक खेलाडीले फेरि एकैचोटि पछाडि राख्नु पर्छ। उहाँ आफ्ना गुणहरू अनुसार मूल्याङ्कन गरिएको छ, र, हाम्रो साथ जस्तै, टोलीको लागि उनको मूल्यको लागि। अज्याक्समा, व्यक्तिगत कमजोरीहरू टोलीले ढाकिएको थियो। त्यो टोली भवनको सार हो। उहाँ टोलीको कारण एक्सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य देशहरू हाम्रो पछि लाग्ने सन्दर्भमा छन्: त्यहाँ के कुरा फरक छ। "
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: Jordi Alba को लागि एक पुरानो मित्र
लुईन वान गल एक युवा जर्दी अल्बा संग जब उनी बच्चा थिए। बार्सिलोनामा उनी आफ्नो परिवारलाई भेट्छिन् र पछि देखि उनीहरूका नजिक छन्।
जर्डी यति धेरै प्रेरित हुन्छ जब भ्यान ग्याल उसलाई एक बच्चाको रूपमा रातको रातको लागि कल गर्दछ। उहाँले एक पटक उनलाई संयुक्त हस्ताक्षर गर्न प्रयास गर्नुभयो तर बोर्डको सट्टामा उनको सट्टा लूका शङ्लाई साइन इन गर्न निर्देशन दिईयो।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: खेलाडीहरूले उहाँलाई मन पराउँदैन वास्तवमा उसलाई मनपर्दैन
उनले बार्सिलोना भ्रमण गरेपछि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको ब्राजील मिडफेलर गियोनोनीलाई पराजित गरे, उनलाई बेंचमा रुकुम गर्दै र अन्ततः ओलम्पिकको लागी प्रस्थान गरे। 2010 मा, प्लेयरले निम्न भन्नको लागि थियो: "वान गाल अहंकार, गर्व र समस्या छ। उनको साथ मेरो जीवन भयानक थियो। ब्राजिलहरूले उसलाई चाहँदैनन्; उहाँले मलाई तल राख्नुभयो र रितोल्डो र सोनी एन्डरसनसँग लडाइँ गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई हामीलाई बहाना दिनुभएको छ कि हामी राम्रो प्रशिक्षण छैनौं। मलाई थाहा छ कि उनको केही शंका छ। उहाँ फुटबलको कुनै विचार छैन, केहि पनि थाहा छैन। त्यतिबेला म उहाँसंग भएको थिएँ, उहाँले सधैं त्यही प्रशिक्षण दिनुभयो। त्यो पागल छ। "र अन्तर र वान ग्यालको बायर्न म्यूनिखको बीचमा 2010 चैंपियंस लीग फाइनलमा, Giovanni यसो भन्यो:" यदि यो मेरो थियो भने, मैले यो मनपराउथे भने अन्तरले 15-0 लाई लुकाओबाट पाँच गोल गरे।
बार्सिलोनाका साथ दुईवटा म्यालहरू (दोस्रो सेकेन्डभन्दा बढी सफल) भ्यान गलले नियमित रूपमा मिडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै खेलाडी र समर्थकहरूलाई जित्न संघर्ष गरे। टीमको स्टार प्लेयरको साथमा उनको पङ्क्तिहरू बारिलिडोमा पर्थ्यो।
रेवलडोडोले भने, "मलाई भ्यान ग्यालको परवाह छैन र उहाँले मेरो हेरविचार गर्नुहुन्न।"
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: आयरन फिस्टको साथ संयुक्त व्यवस्थापन
एशले यंगले आफ्नो टोली-साथीहरूको बदलिएको कोठा प्लेलिस्टको गोप्य प्रकट गरेको छ - र यो तपाईं के आशा गर्नुहुन्न। युवा रेड डेभिल्स मा निवासी डीजे हुनुको लागि जानिन्छ, तर उनले म्यानुअल वेगाल ग्याले व्यान ग्यालले मात्र घर र मजेदार घर सङ्गीत खेल्न सख्त आदेशमा भर्ना गरे।
यो संयुक्त खेलाडीहरूलाई ठूलो अचम्मको रूपमा आयो जुन लुइस वान गलले आफ्नो पक्षलाई विजय हासिल गरेपछि फिक्री-प्रेरित बास रेखासँग अचम्मको आवाज सुन्न भन्दा राम्रोसँग केही प्रेम गर्दैन। कहिलेकाँही, उसले डीजे सेट आफैलाई सँभाल्छ।